कसको दबाबमा हटाइयो गोकर्ण विष्टलाई ? [नालीबेलीसहित] - Rapti Khabar
मुख्य पृष्ठ /मुख्य समाचार/कसको दबाबमा हटाइयो गोकर्ण विष्टलाई ? [नालीबेलीसहित]
मङ्सिर ५, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन साहसिक भूमिका निर्वाह गरेका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको बहिगर्मनप्रति नागरिकस्तरमा चासो र चर्चा भइरहेको छ । यो खबर हामीले अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ ।
पश्चिम नेपालमा भूकम्पको ठूलो झट्का: कहाँ कहाँ हल्लायो
डोजर आतंकले गाउँ नै विस्थापित, डोजर देख्दा तर्सिन्छन् गाउँले